Ihhotela "Emerald", Anapa Incazelo, izibuyekezo nezithombe
Kulesi sihloko sifuna ukukhuluma ngani omunye izakhiwo hotel kwalesi sigodi eduze Anapa Vityazevo. Ihhotela "Emerald" (Anapa) eyakhelwe amakhilomitha ayishumi nanhlanu kusukela yokungcebeleka edume.
Leli dolobhana Vityazevo
Leli dolobhana kuyingxenye Vityazevo Anapa, kudala iwine isihloko omunye ethandwa kakhulu futhi ezinkulu izivakashi we Black Sea ugu lweNyakatho Krasnodar esifundeni. Leli dolobhana akhelene hhayi kuphela kolwandle kodwa futhi amanzi Vityazevskogo esizalweni somfula. Le ndawo zaziwa unqambothi emabhishi ayo amakhulu, okuyinto abe sezingeni abalulekile.
ulwandle engajulile efudumele, sezwe mnene, ezomile nobumnene sezulu saseMediterranean sewenze emzaneni indawo ethandwa phakathi baseRussia. Ngo Vityazevo ukuphumula ikakhulukazi imibhangqwana nezingane kanye nabantu abasha. Kuvele Eqinisweni ezithakazelisayo wukuthi iningi labantu bendawo - amaGreki. Lokhu kwenza lo mlando ube charm ekhethekile emzaneni, ngoba ngisho izakhiwo, amasiko, ukudla has izici zayo siqu. Abantu bomdabu ngokuthi Little Athens Vityazevo. Okungenani kanye kuwufanele ngokuvakashela ukushintsha eyeqisayo mayelana coast Black Sea.
endaweni Omangalisayo, okungase ukuziqhayisa Anapa - Vityazevo. Ihhotela "Emerald" akuyona kuphela lapha, kodwa omunye the best. Leli dolobhana ngempela ukukhetha olukhulu yokuhlala: amahhotela, amamotheli, izikhungo zezokwelapha nezempilo, emakhaya, ngisho amatende ogwini zasendle.
umoya ohlanzekile, ilanga, ulwandle, ovusa namathafa - konke lokhu kwenza izivakashi zayo Anapa (Vityazevo). Ihhotela "Emerald" - yokuhlala kukho olukhulu labo abeza lapha ukuba ubalekele ukukhathazeka kwansuku zonke futhi sithole amandla namandla.
Ihhotela isenkabeni kwalesi sigodi, phezu Boulevard odumile Paralia, okuyinto lokuhlushwa ukuphila resort. Ngo lemizuzu eziyishumi kude iyona sandy beach emangalisayo. Isakhiwo ine indawo 0.8 amahektha, okuyinto ngempela landscaped futhi wokuvikela.
"Emerald" Ihhotela (Anapa) lakhiwa 2013. Amagumbi emelelwa 220 amafulethi lwezigaba ezahlukene.
Isakhiwo sokuqala has 82 amakamelo: suite junior, i-suite ejwayelekile, isixhobo nge kuvulandi. Igumbi ngalinye ifakwe esiqandisini, air-conditioning system, i-TV, ephephile, hairdryer, ephephile, yokugezela yangasese, ifakwe zonke izinto ezidingekayo.
Esikhathini izindlu yesibili 119 amakamelo izigaba ezilandelayo: Suite ne Balcony, Standard, Deluxe, Suite. amakamelo Ihhotela kuyafana e isakhiwo main.
Ngaphezu kwalokho, insimu has Cottages lokhuni. Amagumbi kuzo yilezi en-suite elineshawa, ngocingo, isiqandisi, i-TV kanye air conditioning. Igumbi ngalinye has a yokugezela nazo zonke zokugeza kanye amathawula zinikezwa kits. Kasibili zonke ezindlini yehhotela babe balcony.
Ihhotela "Emerald" (Anapa) inikeza izigaba ezilandelayo zokuhlala:
Standard. Amakamero la makhulu ngokuphindwe square metres mayelana 18. Izindleko ezindlini ngosuku - ruble 4100. Amakamelo zenzelwe izivakashi ezimbili, kodwa kukhona omunye esihlalweni ezengeziwe.
plus ejwayelekile. Igumbi ndawo - 22 square metres. It angazamukela abantu abathathu. Izindleko ezindlini - ruble 4300.
samakamelo amancane. usayizi efulethini - 30 square metres. Kulesi ikamelo, ngaphandle embhedeni kabili, kukhona embhedeni usofa. It angazamukela izivakashi ezine. Izindleko ezindlini - ruble 4900.
Suite - igumbi kabili (30 square metres). Yakhelwe ezine amaholide amafulethi abiza - ruble 5200.
Deluxe - indlu enamakamelo amabili suite, okuyinto angazamukela abantu abahlanu. Izindleko ezindlini - ruble 5700.
Amakamelo e Cottages ngokhuni sibe indawo engaba ngu-19 square metres. Ziklanyelwe yezivakashi ezimbili, kodwa ifakwe eyodwa Embhedeni owenezelwe. Ebusuku lezi zokuhlala izobiza ruble 3400.
Ihhotela "Emerald" (Anapa): Incazelo
Isakhiwo inikeza indawo yokuhlala kokutamasa ogwini Black Sea. Ihhotela "Emerald" (Anapa) - yindawo enhle kulabo dream of iholidi elinokuthula nokunokuthula ngasolwandle. Zonke amafulethi banemibono enhle ogwini futhi indawo wendawo. I Izivakashi zehhotela ahlinzekwa ukudla yohlobo "lezitsha", ehlanganisa iziphuzo ethandwa kakhulu futhi ukudla.
Ihhotela "Emerald" (Vityazevo) unendlela yawo massage emakhazeni. Wonke umuntu wamukelekile ukuba uvakashele ke, ukubaleka ukukhathazeka kwansuku zonke futhi uphumule. Ihhotela enakekela zonke izimenywa zawo, ukuzama ukwenza kokuhlala kwawo ezithakazelisayo futhi zikhululekile. Kungenxa yalesi sizathu, izingane Animators ukusebenza kule ehhotela, ngubani ukubungaza izivakashi omncane. Abazali bazo, Okwamanje, kungase kube isikhathi esithile ukuba uzinikezele.
"Emerald" (3 * Ihhotela, Anapa) inikeza uhlu amasevisi eyengeziwe:
Ukudla (kathathu ngosuku, "lezitsha") kanye nokudla Lesisemkhatsini.
Wi-Fi ukwamukela echibini.
Ukuhlanza kanye ngosuku.
Outdoor pool ehlobo.
Ibha indawo yokulinda ne iziphuzo engcono.
Isevisi yokuwasha (ngenkokhelo).
Izikhungo Shuttle (sikukhokhise inhlawulo).
Qasha iziponji futhi prams.
Ukuqasha amahholo inkomfa.
"Emerald" (3 * Ihhotela, Anapa, Vityazevo) inikeza izivakashi fresh evuthayo yokubhukuda, okuyinto ifakwe endaweni yezingane ekhethekile sika. Izivakashi abasha ku ebaleni lokudlala yezingane ne senhliziyo ezahlukene, ikamelo umdlalo nge nabanakekeli. Animators Professional nsuku Uhlelo ukuzijabulisa indaba ephathwayo nobusuku obungamashumi amane, umculo bukhoma. Budebuduze eziyinkimbinkimbi ehhotela kukhona zokudla, nemishayo, ema-disco, dolphinarium, amanzi ipaki, izitolo, izitolo ezidayisa izinto eziyizikhumbuzo futhi ezikhangayo eminingi.
Ihhotela "Emerald" (Vityazevo) inikeza izivakashi zalo kathathu ngelanga. Umsebenzi eziyinkimbinkimbi uhlobo "lezitsha". Ngesikhathi sokudla kwasemini, ibhulakufesi kanye dinner, yokudlela linikeza ngempela ezihlukahlukene ukudla Culinary imikhiqizo, amasaladi, izithelo nemifino, avalele nemikhiqizo yalo, ehla, ukudla okunoshukela, iziphuzo ezibandayo nesiphuzo.
Izivakashi ingabuye inqume imenyu izingane kudla. Izikhathi eziningana evikini ukuzama ukunikela izivakashi umbukiso-dish (isiNtaliyane, zaseCaucasia, lesiGreki, isiFulentshi kanye Mexican cuisine).
Ngaphezu nengaphakathi kukhona ezengeziwe ugesi kuleli hhotela. Ngezinye izikhathi ezithile, yokudlela ukhonza French fries, irayisi, i-pizza, pancake, ehla kanye iziphuzo.
Uma ufuna cwilisa elangeni splash ngenxa yamagagasi amakhulu efudumele kolwandle, ngaphandle kokushiya phesheya - konke lokhu ungakwazi ukunikeza Anapa. Ihhotela "Emerald" (nesithombe eziboniswe iphepha) kungaba ngempela indawo ohloniphekile eholidini. Kusukela eziyinkimbinkimbi isendaweni avenue ephakathi ye Paralia, izivakashi bazithola maphakathi ukuphila resort. Ukuze ebhishi - ungakwazi nokujikijela itshe lifike. Imizuzu eyishumi ngezinyawo - futhi uwena olwandle. Futhi phansi Boulevard, uzothola eziningi iholidi ukuzijabulisa ezikhangayo amathilomu nezindawo zokudlela. Paralia kuyinto enhle ikakhulukazi kusihlwa.
Abaphumule Vityazevo, qiniseka vakashela ugibele yokuzijabulisa endaweni uphinde ubone Anapa. Izingane kanye nabantu abadala abanesifiso ipaki ngaphansi kwegama "eByzantium". Futhi itholakala inhliziyo kwalesi sigodi, kwaba kusuka kuye kuqala Paralia. Lesi siqiwu yokuzijabulisa eqoqwe inqwaba ezikhangayo: carousel, a coaster roller, isondo Ferris nokuningi. Kuhlaba umxhwele ngokukhethekile yilona "eByzantium" kusihlwa lapho zikhanyiswa nezigidi izibani. Izingane aphume kwepaki kunzima ukuba asuse, ngakho kufanele ube ukulungele babeka round isamba ukuzijabulisa.
Ayikho ezithakazelisayo kancane epaki amanzi "Olympia", etholakala emgwaqeni Golden Sands, eduze kolwandle. Izikhangibavakashi kule ndawo ezithakazelisayo futhi eyingqayizivele. Okwamanje eRussia, akekho omunye epaki amanzi kungaba ukuziqhayisa imidlalo enjalo, okuyinto kuyatholakala lapha. Amanzi epaki lakhiwa iphrojekthi Canadian futhi waqala ukusebenza kuphela 2012. Fans of emidlalweni eyingozi ngokuqinisekile ukunambitha slide, lapho ungakwazi makehle kuphela capsule ekhethekile. isivinini kuso - 12 m / s. "Labyrinth Whirlpool" ithakazelisa kakhulu. Kukhona amanzi ipaki yezingane "Elysium". Lots of okuvelayo zokuzithabisa kuqinisekisiwe.
Esikhathini maphakathi nalesi sigodi, eduze alley emaphakathi, kukhona inkundla yokudlala enkulu ngoba ukusebenza zomculo. It is kakhulu ngokuvamile babonakala ensembles futhi idwala imikhosi aphethwe.
Ungakhohlwa ukuthi Vityazevo - akuyona nje resort Ogwini lolwandle, kodwa futhi unalo isikhungo yokwelapha nge Spas. Kule ndawo eyingqayizivele has yamanzi anamandla okwelapha okunenzuzo ukuba esimiso senhliziyo nemithambo yegazi, Bile imbobo, futhi pheshana emathunjini. Luhlelo yamanzi uveza udokotela ngokuvamile ukwelapha kuyinto kwamasonto amabili kuya kwamathathu.
Ngaphezu kwalokho, okunabileko kukhona mlilo odakeni. Babuye okukhulunywa uHomer encwadini "Odyssey" yakhe. Akukona nje kuphela ukuthi bona ngokwabo izintaba-mlilo - kuyinto emehlweni engavamile, ngakho namanje nokungcola kuzo ephulukisa. Abakwazi ukwelapha izifo eziningi, kusukela ukungazali kanye nezifo esikhunjeni. Kundawo Vityazevskom e wentaba le ntaba-mlilo Tizdar odakeni okugeza ngesikhathi esifanayo kuthathe abantu ababili kweshumi.
Ihhotela "Emerald" (Anapa): Izibuyekezo
"Emerald" ehhotela - kuyinto isakhiwo esisha yesimanje ogwini Black Sea. Ngokusho ukubuyekezwa, lena indawo uyamukeleka iholide. Isakhiwo ine izindawo ezinhle nengqalasizinda ezinhle. Ihhotela has konke okudingayo ukuze ube ukuphumula okuhle.
Amagumbi bahlanza nsuku zonke, kanye ngezinsuku ezintathu, ushintsho amathawula kanye amashidi. Izikhonzi friendly, isiphetho senzeka ngokushesha futhi ngaphandle kwezihibe.
Izibuyekezo ezixutshiwe ukuveza izivakashi mayelana nokudla. Akubona bonke babo yanelisekile, okhalazayo ngokuntuleka ukwehluka. kwalawo mazwi, kunzima ukuba yahlulele indlela yeqiniso. Ekuseni, ihhotela kufeza ubisi wokudla, cottage shizi casseroles, pancake inyama noshizi ngiyocasha, ayi, inyama ebandayo, ushizi, amadombolo, amadombolo. Ngezinye kwasemini ezibhebheni kukhona isobho, inkukhu isobho, side izitsha, salads, inyama, imifino, pepper eyayigcwele, izithelo, ehla nezithelo. Phakathi kwasemini, ibhulakufesi kanye dinner nawe ungadla ibha pool. Hlala elambile akunakwenzeka. Yokudlela akuvunyelwe ukuba uphuze utshwala. Ngokusho ukuphumula, ukudla okuhloswe ngaso abantwana, okuyinto ekahle kakhulu. Uhlelo "zonke okufakayo" buyafaneleka ngokuphelele.
Ngeshwa, ihhotela akanawo lolwandle ayo, ukuze ube ukuya emphakathini. Futhi akuyona sikuhlomele ngokuphelele, hhayi ahlanzekile kakhulu. Futhi ngenkathi ogwini inombolo nenqwaba yabantu.
Izingane Animators ukusebenza ngokuphelele. Pool omunye ezimbili izindlu futhi kukhona njalo eziningi abantu. Ezokuzijabulisa Vityazevo ngokwanele, ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuba niqhubeke izindawo ezithakazelisayo Anapa. Of Ikakhulukazi amaholide amanzi injabulo imbangela epaki.
Ngokwe-izivakashi, izinzuzo main of the zehhotela amakamelo lovely ukudla okumnandi eqotho.
Efingqa imiphumela ingxoxo mayelana ehhotela "Emerald", siphawula ukuthi lesi sakhiwo eduze Anapa kungenziwa Kunconywa ukuba izivakashi uphumule. Beautiful ulwandle afudumele, ububanzi olunesihlabathi, amakamelo ethokomele futhi insimu enhle ... Yini enye engcono?
Dit Evrika Beach Club Ihhotela 4 * (Bulgaria, Sunny Beach): incazelo ehhotela, imisebenzi, ukubuyekeza
Ihhotela La Conceição eSithasiselweni 2 * (Morjim, India): incazelo, izithombe, izibuyekezo zezivakashi
Gunes Suntime Ihhotela 3 * (Turkey, Alanya): izithombe kanye nokubuyekeza
Ihhotela Florida Beach Ihhotela 4 * (Ayia Napa): kuzibuyekezo, izintengo
Sanatorium yezingane "Youth" (Sochi): izithombe nokubuyekezwa
Pyramid Welanga Umuzi Teotihuacan, Mexico lasendulo
Russian isibhamu Kwenhlekelele "Jorge"
Itkul (Lake, Chelyabinsk Region): ukushayela?
Low-carb Ukudla - imenyu, ukubuyekezwa
Golden unkulunkulukazi halo - amakha Dior
Boris Ryzhy: biography, imbangela yokufa, isithombe
Teletskoye Lake: ekamu indawo, izintaba amatende, izakhiwo
OLwandle Imisebenzi Mediterranean: Spa Okurcalar, Turkey
Leninsky Komsomol: ukuzalwa iYoung Communist League e-USSR